WARBIXIN: Ingiriiska Oo Isaga Hari Kara Koobka Aduunka Ee 2018 & Sababta Oo La Ogaaday %
WARBIXIN: Ingiriiska Oo Isaga Hari Kara Koobka Aduunka Ee 2018 & Sababta Oo La Ogaaday
Xoghayaha arrimaha Dibada Ingiriiska, Boris Johnson ayaa sheegay in England ay kasoo bixi karta koobka aduunka ee 2018, hadii la xaqijiyo in dowlada Ruushka ay isku deyday inay sameyso, sarkaal hore oo dhanka Sirdoonka qaabilsanaa.
Sarkaalka oo lagu magacaabo Sergei Skripal, ayaa wuxuu hada ku jiraa xaalad halis ah, waxaana laga shakisan yahay in si olakac ah lays-kugu day in la sumeeyo, taasoo ugu dambeyn suurowday, uuna la xanuunsanayo.
Skripal, oo 66-sano jir ah iyo Gabadhiisa 33-sano jir, ayaa waxay soo bandhigeen Booliska in lagu sameeyo wax aan la aqoonsan, iyagoo ku sugan Magaalada Salisbury. Labadooduba waxay hada ku jiraan qolka daryeelka degdeg ah.
“Ma garanayno waxa ka dhacay Salisbury, laakiin haddii ay sida xun u muuqato, waa denbiyo kale oo la xidhiidha dembiyada aan kusoo xiri karno albaabka Ruushka,” ayuu Johnson usheegay Baarlamaanka Ingiriiska.
“Waxaan ka baqayaa inay ku cadaato Ruushka, wax badan waan ixtiraamnay xooga iyo qubadeeda, UK waxay tahay mid hogaamineysa in laga hortago dhaqamada noocaasn oo kale ah,” ayuu hadalkiisa ku daray.
“Waxaan aaminsahay inay noqon doonto mid aad u adag, in la arko sida ay UK u aadi karto koobka aduunka ee [Ruushka lagu qaban doono],” ayuu hadalkiisa ku daray, Wasiirka arrimaha dibada Ingiriiska.
Haddii Xukuumada Moscow ku cadaato inay ka dambeysay xanuunka Skripal, Johnson wuxuu yiri, way adkaan doontaa in la arko sida Britain ay uga qeybgali laheyd Koobka Adduunka ee Russia, kaasoo bilaha June iyo July qabsoomaya.
Sikastaba, hadii ay dhacdo in Ingiriiska, uu baxo koobka aduunka ee 2018, ayaa waxay wax dhimi kartaa xiisaha iyo dhananka koobka aduunka, iyadoo hada la ogyahay in uusan ka qeyb galeen xulka Talyaaniga.
Boris JohnsonKoobka Aduunk 2018